Òtù - World March
Afọ iri mgbe 1M World March nzukọ anyị na-alaghachi na ịnọgide na-eruwanye ndị mmadụ
La 1M World March maka Udo na Nnochi O mere ihe ruru otu puku ihe omume na obodo 400 nke o si na 97 na-aga na 5 continents. Ihe kariri umu 2000 sooro. Ihe dị ka puku kilomita abụọ gara, ọtụtụ narị puku ndị mmadụ na-agakwa.
Site na ahụmịhe a chịkọtara ma gụọ na ihe ngosi zuru oke nke inwe ọbụna nsonye ka ukwuu, nkwado na imekọ ihe ọnụ ... A na-ezube iji mezuo 2nd World March for Peace and Nonviolence 2019-2020.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere 1ª March anyị nwere ụfọdụ ihe onwunwe iji nye gị:
Ịnwere ike ibudata maka n'efu Akwụkwọ bụ World March nke na-achikota ụfọdụ n'ime akụkụ ndị kasị pụta ìhè nke nnukwu ihe ahụ.
Ị nwere ike ịmata nke ọma ihe merenụ na weebụsaịtị ochie nke 1M World March
Maka gịnị? Ozi Anyị
Iji katọọ ọnọdụ ụwa dị ize ndụ na ọgba aghara na-arịwanye elu, mụbaa na-eji ngwá agha eme ihe mgbe ọtụtụ ebe na mbara ụwa dị ọtụtụ na-egbu oge n'ihi enweghị nri na mmiri.
Iji nọgide na-eme ka a mara na ọ bụ site na "udo" na "enweghị ike" na ụmụ mmadụ ga-emepe ọdịnihu ya.
Nkwa dị ukwuu
Iji anya nke uche na-dị iche iche na iche iche ime ihe ziri ezi na ndị mmadụ, dị iche iche na ndị na-emepe emepe na ọtụtụ ebe na ntụziaka nke mmejuputa ruuru mmadụ, ndị na-abụghị ịkpa ókè, imekọ ihe ọnụ, udo coexistence na-abụghị ime ihe ike.
Iji na-enye olu ọhụrụ ọgbọ ndị na-achọ weghara na Chọpụta, wụnye omenala Nonviolence na mkpokọta pụrụ ichetụ n'echiche, agụmakwụkwọ, na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, otu ... N'otu ụzọ ahụ na a afọ ole na ole ọ na-wụnye imata ihe banyere gburugburu ebe obibi
Ndị na-eme nkwalite
Ndị na-eme nkwado (EP) nke ga-esite n'omume na ọrụ ha na-ebulite site na njikọ mmadụ, na mmụọ nke "onye ọ bụla na-elekọta ihe ọ na-atụ aro".
Na mba ndị nwere PE na ọtụtụ obodo, a ga-eguzobe Team Team Promoter. Na EP ndị a, ọtụtụ òtù dịka ndị mmadụ nwere ike isonye.
A ga-enye Pes ndị a dịka ụzọ na ụdị ọrụ, ọhụụ, imekọ ihe ọnụ na nkwekọrịta iji hazie atụmatụ.
Nkwado Atụmatụ (PA)
Ha na-esokwa ndị mmadụ, otu na ọbụna ụlọ ọrụ.
Ndị a bụ ebe nke sara mbara ma iche iche na-ekere òkè EP, ebe ị nwere ike na-enye ọtụtụ nke atumatu, ma n'ihi na ihe nlereanya site oru (nkụzi, na-eto eto, ndị inyom) ma ọ bụ ebe (obi, obodo, na mahadum), wdg
PA ga-enwe onye nnọchianya ma ọ bụ jikọta ya na EP nke obodo ahụ.
Iji chịkọta ọnụọgụ dịgasị iche iche nke usoro, kalenda na nlegharị anya, ọ dị mkpa iji otu mba na-arụkọ ọrụ ọnụ n'etiti mba na mpaghara.
Mgbe na ebee?
La 2MMM ga-amalite na Madrid el 2 October, 2019, International Day of Nonviolence, afọ iri mgbe 1MMM. Ọ ga-ahapụ na ntụziaka nke Africa, North America, Central na South, na-awụli elu Oceania, gabiga Asia n'ikpeazụ Europe, eru Madrid na March 8, 2020, Women'sbọchị Ndị Nwanyị Mba .wa. Mgbe ị gbachara mbara ụwa gburugburu ụbọchị 159. E mere atụmatụ na 2MMM Ọ ga-agafe karịa mba 100 na ọtụtụ narị puku ndị na-eme ihe nkiri ga-ekere òkè n'ọrụ a zuru ụwa ọnụ.